Virus အမျိုးအစားများနှင့် Virus ကာကွယ်နည်းများ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
ဒီအကြောင်းကို ကျွန်တော် ( အန်တီ Mod ) ဖြစ်တဲ့နေ့ 15-08-2010 က အမှတ်တရ အနေနဲ့ စရေးခဲ့တာပါ - ဒါပေမယ့် တစ်ခြား ဖိုရမ်က ပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေ မေးမြန်းချက်လေးတွေ တစ်ဖက်ကနေ တတ်နိုင်သလောက် ဖြေရင်းနဲ့ ချက်ချင်း မတင်ဖြစ်ပဲ ဒီနေ့ထိ ရောက်လာခဲ့တာပါ။ စစချင်းတော့ ကျွန်တော် ပို့စ် အသစ်တင်ဖို့ထက် ပို့စ် အဟောင်းကိုပဲ ဆက်ရေးဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့် အဲ့နေ့က အရမ်းပျော်နေတာ နဲ့ ပို့စ် အဟောင်း မရေးတော့ပဲ ( အန်တီ Mod ) ဖြစ်တဲ့နေ့ အထိမ်းအမှတ် အနေနဲ့ အကျိုးရှိတဲ့ တစ်ခြား အကြောင်းအရာလေး တစ်ခုကို အမှတ်တရ ဖြစ်အောင် ရေးမယ်ဆိုပြီး ဒီအကြောင်းကို ရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တော့ Moderator ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် တော်လို့ တတ်လို့ - ကျွန်တော် ကောင်းလို့ မဟုတ်ပါဘူး - ကျွန်တော် မျှဝေခွင့် ရအောင် တည်ရှိပေးနေတဲ့ မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် နဲ့ မြန်မာမိသားစုဝင်တွေ ဆိုတာ ရှိနေလို့ ဒီလို ရပ်တည်ခွင့် ရတာပါ - ဘယ်လောက်ပဲ လှူဒါန်းချင် လှူဒါန်းချင် အလှူခံ ပုဂ္ဂိုလ် မရှိရင် ဒါန မမြောက်သလို - ကျွန်တော် ဘယ်လောက်ပဲ ပေးချင်ပေးချင် ကျွန်တော်ပေးတဲ့ အကြောင်းအရာကို လိုချင်တဲ့ သူရှိမနေရင် KznT ဆိုတာလည်း ရှိလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး - အဲတာကြောင့် မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် ကို တည်ထောင်ခဲ့ကြသူ အားလုံး လည်ပတ်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ ကျားကန်ကြိုးစားပေးခဲ့ကြသူ အားလုံး နဲ့ မြန်မာမိသားစုဝင်အားလုံးကို ဒီနေရာကနေ အတိုင်းအဆမသိ ကျေးဇူး တင်နေမိပါတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း ပြောကြားခဲ့ ချင်ပါတယ်။
အဲတော့ Topic နဲ့ မဆိုင်တာ ရပ်ပြီး Topic နဲ့ ဆိုင်တာ စပါမယ် - Topic မစခင် မေးခွန်း တစ်ခု မေးကြည့်ချင်တာက မြန်မာမိသားစုဝင်တွေ viruses, spyware, scareware, trojans, နဲ့ worms တွေ အကြောင်း ဘယ်လောက်တောင်များ နားလည် ထားကြပါသလဲ - ဒီလို မေးခွန်းမေးလိုက်လို့ ကျွန်တော် က သူတို့နဲ့ ပတ်သတ်လို့ အများကြီး သိနေခဲ့လို့ မဟုတ်ပါဘူး - ကျွန်တော့် မိသားစုဝင်တွေကို နေ့စဉ်နီးပါး တစ်ယောက် မဟုတ် တစ်ယောက်ကို ဒုက္ခလိုက်ပေးနေတဲ့ ဒီ Virus တွေ အကြောင်းကို ကျွန်တော် သိနားလည် ထားသလောက်လေး မျှဝေချင်လို့ပါ။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် အဓိက Target ထားပြီး ပြောသွားမှာ malware အမျိုးအစား အမျိုးမျိုး အကြောင်း နဲ့ သူတို့ ရန်ကို ဘယ်လို ကာကွယ် သွားမယ် ဆိုတာကို အလွယ်တကူ မှတ်မိသိရှိ လွယ်အောင် ဖော်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ကျွန်တော် ဒီအကြောင်းအရာကို မရေးခင်တည်းက အင်တာနက်ထဲမှာ Virus အမျိုးအစားတွေ အကြောင်းကို ကိုယ်နားလည် သိရှိထားသလောက် ဝေမျှထားခဲ့ဖူးကြပြီးသား အကြောင်းအရာတွေ ရှိနေတာ ကျွန်တော် သတိထားမိပါတယ် - ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် တတ်နိုင်သမျှ ပြည့်စုံအောင် ကြိုးစားပေးသွားမှာပါ။ ခုနောက်ပိုင်း အင်တာနက် ခေတ်မှာ Virus ဆိုတာ ရှိနေသေးပေမယ့် Virus ထက်ပိုပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တိုက်ခိုက်ခံလာရတာ Malware ပါ။ Malicious software ဆိုတာကို အတိုချုန်းထားတဲ့ Malware ဆိုတာဟာ တစ်ခြား လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကွန်ပြူတာ ထဲက သတင်းအချက်အလက် တွေကို လူမသိ သူမသိ ခိုးယူဖို့ - သူများ ကွန်ပြူတာကို ဒုက္ခပေးဖို့ လှလှ ပပ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ viruses တွေ - worms တွေ spyware တွေ အားလုံးကို ယေဘုယျ အနေနဲ့ စကားလုံး တစ်လုံးတည်း အဖြစ် ကိုယ်စားပြုထားတဲ့ စာလုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Viruses ဆိုတာ ဖိုင်တွေကို ဖျက်ဆီးတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အမြဲတမ်း နားယဉ်နေကြတဲ့ computer virus ဆိုတာကို malware ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ ဆင်တူတယ်လို့ ထင်မှတ်မှားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ့ စကားလုံးနှစ်လုံးဟာ မဆင်တူပါဘူး - နဲနဲ အကျယ်ချဲ့ပြီး ရှင်းရရင် virus ဆိုတာမျိုးဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပုံတူပွားပြီး ကွန်ပြူတာကို တိုက်ခိုက်တဲ့ အမျိုးအစားပါ - ဆိုရရင် သူက ဝင်လာတုန်းက တစ်ကောင်တည်း ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် Copy ပြန်လုပ်ပြီး file တစ်ခုကနေ နောက်တစ်ခုကို ကူးတယ် - နောက် Copy နဲ့ Share လမ်းကြောင်းတွေကနေ တစ်ဆင့် စက်တစ်ခုကနေ နောက်တစ်ခုကို ဆက်ဖြန့်တယ် - နောက် viruses အများစုဟာ တစ်ကိုယ်ရည် တစ်ကာယ ရပ်တည်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ executable files အမျိုးအစားတွေ ဖြစ်တတ်ပြီး တစ်ချို့ကတော့ master boot record အဖြစ် နောက် autorun scripts - MS Office macros နဲ့ တစ်ချို့ နေရာတွေမှာဆိုရင် arbitrary files တွေ အဖြစ်လည်း တည်ရှိနေတတ်ပါတယ်။ သူတို့ကို စီစဉ်ထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ Programmer ရဲ့ စွမ်းရည်နဲ့ ရည်ရွက်ချက်ကို လိုက်ပြီး Target တွေလည်း မတူညီကြပါဘူး -
Viruses တော်တော်များများ - အထူးသဖြင့် CIH လိုမျိုးကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကွန်ပြူတာထဲက ဖိုင်တွေကို တစ်စုံတစ်ယောက် က ဖျက်ပစ်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခု ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာ System တစ်ခုလုံး လုံးဝ ဘာတစ်ခုမှ လုပ်ဆောင်လို့ မရတော့လောက်အောင် ဖန်တီးထားတဲ့ Virus မျိုး ဖြစ်ပါတယ် - အဲတော့ ကျွန်တော် အဓိက Target ထားပြီး ပြောချင်တာ virus ဆိုတာမျိုးဟာ ကိုယ့်ရဲ့ System ကို ကိုယ့်ရဲ့ ချုပ်ထိန်းမှု အောက်မှာ မရှိတော့ပဲ အဲ့ဒီ့ Program က ညွှန်ကြားတဲ့ ခိုင်းစေချက် အတိုင်း လိုက်ပါလုပ်ဆောင်စေတဲ့ အဖျက်စွမ်းအားကြီးတဲ့ အမျိုးအစား ဖြစ်တယ်ဆိုတာပါ။
အလွယ်ပြောကြမယ်ဆိုရင် Viruses ရန်ကို ကာကွယ်ဖို့ အတွက် Latest definitions ကို အမြဲတမ်း Update ပေးထားတဲ့ antivirus application ကို အသုံးပြုပါလို့ ပြောလို့ ရပါတယ် - ဒါပေမယ့်လည်း ဒါတစ်ခုတည်းတင် မဟုတ်ပါဘူး - တစ်ချို့က Viruses ရန်ကို ကာကွယ်ဖို့ Antivirus ရှိရင် ရတယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်စက်မှာ Antivirus တင်ပြီးတာနဲ့ စိတ်ထင်ရာ လျှောက်ဝင်ကြ - ဥပမာ Porn sites - Keygen/Crack Sites - နောက် တွေ့ကရာ USB Stick ထိုးကြ - Privacy ဆန်ဆန် သုံးသင့်တဲ့ ကိုယ့် Flash Drive - External HD ဆိုတာကို စေတနာ ကောင်းကောင်းနဲ့ သူများတကာကို ဌားကြ - ကိုယ့်ဆီ ပြန်လာတော့ Virus ပါလာတာ ကိုယ်က မသိ - အဲတာကို စက်မှာတပ်သုံး - မြင်သမျှ ဆန်းဆန်းပြားပြား ဖိုင် - ဥပမာ - New Folder ဆို " ဖိုဒါလေးက အခုမှ Create လုပ်ထားတာဟ - အသစ်လေး ဘာလေးများ ထည့်ထားမလဲ " ဆိုပြီး စပ်စု - စသဖြင့် ဆင်ခြင်မှုနဲ့ စဉ်းစားချင့်ချိန်မှုကို အရင်မလုပ်ပဲ စပ်စုလိုစိတ်ကို ရှေ့တန်းတင် လုပ်ဆောင်နေမယ် ဆိုရင်တော့ antivirus application ကို Latest definitions နဲ့ အမြဲတမ်း Update ပေးပြီး သုံးနေလည်း Virus ကတော့ ကိုက်ခံ ရမှာပါပဲ - သိထားဖို့ တစ်ခုက Latest definitions ဆိုတာ ဒီ Virus ရှိတယ်ဆိုတာ သိတော့မှ Programmer တွေက ဖြေရှင်းနည်းကို ရေးကြတာ မျိုးပါ။ ဒါ့ကြောင့် Latest definitions ဆိုတာ နောက်ဆုံးပေါ် Virus ကို ဘယ်သော အခါမှ သတ်နိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး - ဒါကို ကျွန်တော်တို့နားလည် ထားဖို့ လိုပါတယ်။ နောက်ပြီး ဖိုင်တစ်ခုခုကို Run တော့မယ် ဆိုတဲ့ အချိန်တိုင်းမှာ filename ကို သေသေချာချာ ကြည့်ပါ။ သူ့ Extensions ကို သေသေချာချာ လေ့လာပါ - ဆိုလိုတာ mp3 လား .mp3.exe လား ဒါမျိုးတွေ သတိရှိဖို့လိုပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် Antivirus ကို Latest definitions နဲ့ အမြဲတမ်း Update ပေးပြီး သုံးနေယုံတင် မဟုတ်ပဲ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ သုံးစွဲနေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အင်တာနက် လမ်းကြောင်း - နောက် ပြင်ပက Share လမ်းကြောင်းတွေနဲ့ ကိုယ့်စက်ကို လာရောက်ပတ်သတ်မယ့် Activities တွေကိုပါ လုံခြုံရေး အသိနဲ့ စောင့်ကြည့်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
Spyware ဆိုတာ ကိုယ်ပိုင် သတင်းအချက်အလက် အကြောင်းအရာတွေကို ခိုးယူတယ်
နောက် အကြောင်းအရာ တစ်ခုက Spyware ! သူ့ကိုတော့ တော်တော်များများ ကြားဖူးနားဝရှိပြီး ရင်းနှီးကြပါတယ်။ Spyware ဆိုတာဟာ ကိုယ့်ကွန်ပြူတာမှာ installed လုပ်ခံ ထားရပြီး ကိုယ် မသိလိုက်တဲ့ - မသိနိုင်တဲ့ သတိမထားမိခင် အချိန်မှာ ကိုယ့် စက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ information ( အကြောင်းအရာ သတင်းအချက်အလက် ) တွေကို နောက်ကွယ်ကနေ Spyware ထုတ်လုပ်သူထံ တိတ်တဆိတ် ပြန်ပို့ပေးနေတဲ့ Software အမျိုးအစား တစ်မျိုးကို ခေါ်ဆိုပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ information ကို ကိုယ်မသိအောင် ခိုးယူတယ် ဆိုမှတော့ဖြင့် ကျွန်တော်တို့ကို ကောင်းကျိုးပေးဖို့ထက် ဆိုးကျိုးပေးဖို့သာ ပိုများမှာပါ - Spyware မှာ ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ချက်မျိုးတွေ ပါလဲ ဆိုရင် တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ ကျွန်တော်တို့ Websites အဝင်အထွက်တွေမှာ ရိုက်သွင်းရလေ့ ရှိတဲ့ passwords ပြောင်းလဲမှုတွေကို နောက်ကွယ်ကနေ မှတ်သားတဲ့ keylogging စနစ်တွေ - နောက် ကိုယ် အင်တာနက်ထဲမှာ ဘာတွေ ရှာတတ်သလဲ - နောက် ကိုယ်သုံးနေကျ browser home page ပြောင်းပစ်တာမျိုး - URL တစ်ခုခုကို ရိုက်ခေါ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်တောင်းဆိုမထားတဲ့ တစ်ခြား Web စာမျက်နှာ တစ်ခုကို ရောက်သွားအောင် လုပ်ဆောင်တာ စသဖြင့် နည်းလမ်းမျိုးစုံ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါတင်မက အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ပုံလိုမျိုး ဘာမှန်း ညာမှန်းမသိ toolbars တွေ အတင်း install လုပ်ခိုင်း - ကိုယ့် passwords နဲ့ credit card numbers ကိုခိုး စသဖြင့် - မျိုးစုံအောင် လည်း လုပ်ဆောင် တတ်ကြပါတယ်။
Spyware တွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ information ကိုခိုးယူပြီး အဲကနေမှ တစ်ဆင့် ငွေရပေါက် တစ်ခု သူတို့ ဖန်တီးချင်တာမျိုးမို့လို့ Spyware ဆိုတာမျိုးက ဘယ်တော့မှ ကွန်ပြူတာကို သုံးစား မရတော့လောက်အောင် ပြဿနာ ပေးတတ်တဲ့ Software မျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး — တကယ်တော့ လူတော်တော်များများရဲ့ စက်မှာ spyware တစ်ခု မဟုတ်တစ်ခု နောက်ကွယ်ကနေ Run နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့ တော်တော်များများ မသိကြတာ များပါတယ်။ Spyware application တစ်ခု တစ်လေလောက် ရှိတာမျိုးက စက်ထဲမှာ ဘာမှ အရေးတကြီး ထည့်ပြီး မှတ်ထားလေ့ မရှိတဲ့ လူမျိုးတွေ အတွက် သိပ် ပြဿနာ ကြီးကြီး ကျယ်ကျယ် မရှိလှပေမယ့် ဒီလို spyware application တွေ တစ်ခုထက်မက installed လုပ်ခံရတာ များလာတဲ့အခါ နောက်ကွယ်ကနေ Spyware အများအပြားရဲ့ စောင့်ကြည့် သတင်းပို့ချင်း ခံရတဲ့ ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးရဲ့ ဘဝမျိုး ရောက်သွားနိုင်တာမို့လို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကွန်ပြူတာက နှေးသထက် နှေးသွားတတ်ပါတယ်။
ဒါတင်မက လူတော်တော်များများက Antivirus ရှိရင် အားလုံး ပြီးတယ်လို့ ထင်နေကြတာလည်း မှားပါတယ်။ Antivirus တိုင်းဟာ Spyware ကို မဖမ်းနိုင်ကြသလို သတ်ဖို့လည်း မစွမ်းဆောင်နိုင် ကြပါဘူး - ဒါ့ကြောင့် Software တစ်ခုခု ကို install လုပ်တော့မယ် ဆိုတဲ့ အချိန်မှာ အရင်ဆုံး လေ့လာသင့်တာ ဒီ application ကို ဘယ်ကထုတ်လဲ - သူတို့ ဘာတွေ အာမခံချက်ပေးလဲ - ဒါမျိုးတွေ လေ့လာပြီးမှ အသုံးပြုသင့်ပါတယ် - စိတ်ခံစားမှုနဲ့ တစ်ခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့ လမ်းညွှန်မှုကို ကောင်းတယ် အထင်နဲ့ အမှတ်မှားပြီး မသုံးစေချင်ပါဘူး။ တကယ်လို့ ကိုယ့်စက်မှာ အထက်မှာ ဖော်ပြထားခဲ့တဲ့ ပုံစံတွေ အတိုင်း ဖြစ်နေမယ် - စက်ကလည်း ထင်မှတ်မထားရလောက်အောင် လေးလံနေမယ် ဆိုရင် အကောင်းဆုံးက Spyware ရှိမရှိ စစ်ဆေး လိုက်ဖို့ပါ။ Spyware ရှင်းဖို့ ဘယ် Software သုံးသင့်မလဲ ဆိုရင် MalwareBytes နဲ့ SuperAntiSpyware ကို ပေါင်းသုံးပြီး စစ်ဆေး ရှင်းလင်းစေချင်ပါတယ်။
Scareware ဆိုတာ ဘယ်လုပ်ရမှန်း မသိအောင် အကျပ်ကိုင်တယ်။
ခြိမ်းခြောက်တာ အကျပ်ကိုင်တာမျိုးကို လူတော်တော်များများ မုန်းကြပါတယ် - ကျွန်တော်လည်း မုန်းတယ် - ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ အကျပ်ကိုင်တယ်ဆိုကတည်းက ကိုယ့်အတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် ဆိုတာ မရှိဘူး - သူဖြစ်ချင်တာကို ကိုယ့်ဘက်က လိုက်လျောအောင် အတင်းအဓမ္မ မဖြစ်မနေ တောင်းဆိုတာမျိုး မို့လို့ပါ။ Scareware ဆိုတာလည်း ဒီသဘောပါပဲ - ခုနောက်ပိုင်း ဒီတိုက်ခိုက်နည်းက တော်တော်လေး ခေတ်စားလာတဲ့ တိုက်ခိုက်နည်းပါ။ ဘယ်လိုမျိုးလဲ ဆိုတာ ဥပမာပြောရရင် တစ်ချို့လည်း တွေ့ဖူးရင် တွေ့ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ site တစ်ခုခုကို သွားရင်းနဲ့ နေရင်းထိုင်ရင်း antivirus application လိုလို ဘာလိုလို Spyware စစ်ပေးတာလိုလို ဘာလိုလို ပေါ်ချလာပြီး မင်းကွန်ပြူတာမှာ virus တွေ ရှိနေနိုင်တယ် - သေချာသွားအောင် ငါ့ရဲ့ free scan နဲ့ virus စစ်ကြည့်ပါလားဆိုပြီး recommend ပေးလာရော - ကိုယ်တွေကလည်း free scan ဆိုတော့ အယောင်ယောင်အမှားမှားနဲ့ ကောင်းတယ်ပေါ့ - အလကားရတာပဲ စစ်မယ်ဆိုပြီး OK ပေးလိုက်တယ် - အဲ့မှာ ပြဿနာ စတာပဲ - အဲ့ဒီ့ Applications က ကိုယ်က OK/Agree ဆိုတာမျိုး ပေးလိုက်တာနဲ့ သူ့ဘာသာ နေရင်းထိုင်ရင်း Download တွေချ - Install တွေလုပ် Scan တွေဖတ် နေလုပ်နေပါလေရော - နောက်ခဏလောက်နေတော့ ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပြူတာမှာတော့ဖြင့် virus ကတော့ ဘယ်နကောင် - Spyware ကတော့ ဘယ်နရာ စသဖြင့် ပြ - နောက်ပြီး သူ့ Software နဲ့ ရှင်းပေးထားတာ Spyware ဘယ်နကောင် တော့ဖြင့် သေသွားပြီ - ဒါပေမယ့် ဒါက trail version မို့လို့ အကုန်တော့ ရှင်းမပေးနိုင်ဘူး - အကုန်ရှင်းပစ်စေချင်ရင် full license ကို ပိုက်ဆံနဲ့ ဝယ်ဆိုပြီး အကျပ်ကိုင်လာပါလေရော ( ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်တယ် သူက free scan လုပ်ပေးမယ်ပဲ ပြောတာ တွေ့ရင် ရှင်းပေးမယ်လို့ ပြောထားတာမှ မဟုတ်တာ ) - တစ်ချို့ကျတော့ virus ဆိုကြောက်တာပဲ သိတယ် - ဒီအတွေ့အကြုံမျိုးကို မကြုံဘူးတော့ ဟာသွားပါပြီ - ငါ့စက်မှာတော့ virus တွေ မနည်းပါလားဆိုပြီး သူတောင်းတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ပေးပြီးဝယ်ကြ ပြုကြ ရှင်းကြ စသဖြင့် - တကယ်တမ်း ဟုတ်လားဆိုတော့ ဘာမှမဟုတ် - ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ပိုက်ဆံကတော့ ပါသွားပြီ - ဒါတွေက scareware applications တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Scareware တွေရဲ့ ဆိုးရွားတဲ့ တစ်ချက်က သူတို့ကိုကိုယ်က စက်ထဲမှာ တစ်ခါ install လုပ်လိုက်မိတာနဲ့ သူတို့ တောင်းတဲ့ ပိုက်ဆံကို မပေးမချင်း တစ်ချိန်လုံး Alarm တွေတက် - လူကို စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်အောင်လုပ် - ဒါတင်မက တစ်ချို့ အခြေအနေတွေမှာဆိုရင် သူ့ကို ပြန် uninstall လုပ်လို့ မရယုံတင်မက စက်ပါသုံးလို့ မရတော့လောက်တဲ့ အခြေအနေထိ ဖြစ်အောင် သူက လုပ်ဆောင်ပစ်တတ်ပါတယ်။
ဒီလို အကျပ်ကိုင်မှုမျိုး ဒီလို Scareware မျိုးနဲ့ ကြုံတွေ့လာရပြီ ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက Google Search box မှာ ကိုယ့်စက်မှာ ဝင်နေတဲ့ Scareware ရဲ့ နာမည်ကို ရိုက်ထည့်ပြီး ရှာဖွေလိုက်ပါ။ အဲ့ကနေတစ်ဆင့် တွေ့ရှိလာရတဲ့ အထူး ညွှန်ကြားချက်တွေကို လိုက်ပြီး တိတိကျကျ လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် ဒီ Scareware ကို ဘယ်လို ဖျက်ထုတ်နိုင်မယ်ဆိုတာ သိရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း တစ်ခါတစ်လေ မှာ သီးသန့်ညွှန်ကြားချက် ဆိုပေမယ့် လမ်းညွှန်သူ တော်တော်များများ ကလည်း တစ်ယောက်ဖော်ပြချက်ကို တစ်ယောက် ကိုးကားဖော်ပြကြတာပဲ များပါတယ်။ ဒီလို Scareware ပြဿနာ တက်လို့ Google မှာ မေးလိုက်ရင် အများဆုံး ရတတ်တဲ့ အဖြေက MalwareBytes - SuperAntiSpyware နဲ့ လိုအပ်မယ်ဆို ComboFix ကို ပေါင်းပြီး run ဆိုတဲ့ အဖြေမျိုးပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း အဲ့နည်းကပဲ ပြဿနာရဲ့ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများကို ပြေလည်စေတာ လည်း အမှန်ပါပဲ။
Trojan Horses ဆိုတာ နောက်ကွယ်ကနေ ကြိုးကိုင်တယ်။
ထရိုဂျန်မြို့ အကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်က ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာလည်း သင်ခဲ့ရပါတယ်။ ထိုးဖေါက်ဝင်ရောက် ဖို့ ခက်ခဲလှပါတယ် ဆိုတဲ့ ထရိုဂျန်မြို့ကြီးထဲကို သစ်သားမြင်းရုပ်ကြီးတစ်ခုနဲ့ ပရိယာယ်ဆင်ပြီး ၀င်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ရန်သူစစ်သားတွေ အကြောင်းကို သမိုင်းပုံပြင်တစ်ပုဒ် အနေနဲ့ တည်ရှိနေခဲ့ရာကနေ ခု မျက်မှောက်ခေတ်မှာတော့ ကမ္ဘာ့နေရာ အနှံအသီးသီးက ကိုယ်လက်လှမ်း မမှီနိုင်တဲ့ ကွန်ပြူတာတွေကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက် နိုင်ဖို့ Trojan horses ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ပဲ နောက်ထပ် ထရိုဂျန် တစ်မျိုး ပေါ်ထွက်လာပြန်ပါပြီ - သူရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ တစ်ဖက်က ကွန်ပြူတာ သုံးစွဲသူ မသိလိုက်ခင်မှာ သူ့ကွန်ပြူတာထဲကို ဝင်ရောက်ပြီး နောက်ကွယ်ကနေ ကောင်းကောင်း ဒုက္ခပေးနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကို ရည်ညွှန်းချင်တာပါ။ Trojan horses ဆိုတာ applications တစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး တစ်ဖက်က ကွန်ပြူတာ သုံးစွဲသူ user ကို ကောင်းကောင်း ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ အမျိုးအစား တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ပြဿနာရပ်တော်တော်များများမှာတော့ trojans ဆိုတာ သမိုင်းပုံပြင် ထဲကအတိုင်း ကိုယ်မသိလိုက်ခင် တစ်ဖက်လူကို ကိုယ့်ကွန်ပြူတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စိတ်ကြိုက် ထိန်းချုပ် လုပ်ဆောင်လို့ ရအောင် နောက်ကွယ်ကနေ လမ်းဖွင့်ပေးပါတယ်။
Virus နဲ့ Trojan ရဲ့ကြားမှာ အဓိက ကွာခြားသွားတဲ့ တစ်ချက်က trojans တွေဟာ viruses တွေလိုမျိုး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် replicate မလုပ်နိုင်တာပါ - သူတို့တွေကို များသောအားဖြင့် ဘုမသိ ဘမသိ စာတမ်းတစ်ခုခု တက်လာရင် စာကို မဖတ်ပဲ Yes ပေးတတ်တဲ့သူ - အင်တာနက်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အကျွမ်းတဝင် မရှိသေးသူ - Security နည်းတဲ့ ကွန်ပြူတာတွေမှာ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ install လုပ်ဆောင်မိရာကနေ ကျွန်တော်တို့ စက်ထဲကို ဝင်ရောက်ခြင်း ခံရတတ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပြူတာမှာ trojan ဝင်ရောက် ကိန်းအောင်းခံရပြီ ဆိုတာနဲ့ ကိုယ့် ကွန်ပြူတာဟာ ကိုယ့် ရည်ရွယ်ရာကို မလုပ်ဆောင်နိုင်တော့ပဲ ကိုယ်မလိုအပ်တဲ့ မလိုလားတဲ့ တစ်ခြားသူ တစ်ယောက် - ဒါမှမဟုတ် တစ်ခြား အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုရဲ့ အသုံးချခံ ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ် ရောက်ရှိသွားပါတယ်။ ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေလဲ ဆိုရင် Denial of service (DoS) attack လို့ ခေါ်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ computer resource ကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်လို့ မရနိုင်တော့ပဲ web site တွေနဲ့ Service တွေကို တားဆီးပိတ်ပင်ဖို့ ကိုယ့်ကွန်ပြူတာက အသုံးချခံလာရပါတယ် - နောက် ဒီ့ထက်ဆိုးတာ တစ်ခုက Spam ပို့လွှတ်ရာ ဌာန တစ်ခုလို အသုံးချခံရတာပါ။ ဒီလို ပြဿနာတွေကို ဖန်တီးနေတဲ့ trojans ဆိုတဲ့ အကောင်ကို ဖြေရှင်းတားဆီးဖို့အတွက် နည်းလမ်းက ကျွန်တော်တို့ Viruses တားဆီးတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ လုပ်ဆောင်ရမှာတွေက antivirus application ကို up to date ဖြစ်အောင်ထားရမယ် သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာ ဝင်ရောက်လာတဲ့ mails တွေက attachments တွေကို မဖွင့်ကြည့်ခင်မှာ သတိထားပြီး စစ်ဆေးရမယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဖွင့်ကို မဖွင့်ပဲ Delete ပစ်တာ ကောင်းတယ်။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ ဝေမျှနေတဲ့ keygen တို့ crack file တို့ ဆိုတာတွေကို ကိုယ်တိုင် စမ်းသုံးတာမျိုး မလုပ်ပဲ ဘယ်သူတွေ သုံးဖူးလဲ - သူတို့ ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့လည်း ဆိုတာလေ့လာပြီးတော့မှ သုံးစေချင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ keygen တို့ crack file တို့ ဆိုတာ မသုံးပဲ နေနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Worms ဆိုတာ Network ကနေ ကူးစက်ခံရတယ်။
Computer worms ဆိုတာ သူတို့ကိုယ်ကိုယ် သူတို့ copy ပွားပြီး network လမ်းကြောင်းကနေ တစ်ဆင့် တစ်ခြား ကွန်ပြူတာကို ကူးစက်တဲ့ အမျိုးအစားပါ။ နောက်ပြီး Worms တွေဆိုတာ network ကိုသုံးပြီး ပြန့်ပွားတာမျိုး မို့လို့ ခဏချင်းနဲ့ ပြန့်နှံ့လွယ်ပြီး လူသိလည်း များစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူ့ကို ကျွန်တော်တို့တွေက viruses နဲ့ အထင်မှားလေ့ ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ တော်တော်များများ သိကြတဲ့ worms အမျိုးအစားထဲက ဥပမာပေးရမယ် ဆိုရင် ILOVEYOU worm - သူက email attachment ကနေ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ တန်ဖိုးငွေ ပမာဏ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ငါးထောင့် ငါးရာ လောက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ နောက် Code Red worm ဆိုရင် web sites ပေါင်း သုံးသိန်းခွဲကျော် ဖျက်ဆီးခဲ့တယ် - နောက် SQL Slammer က internet traffic တွေကို အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ နှေးကွေးသွားအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ် - နောက်ဆုံး Blaster worm ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပြူတာကို ခဏခဏ Restart ပေးရအောင် ခိုင်းစေခဲ့တယ် - ဒါတွေက Worms တွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် သမိုင်းပါ။
Worms တွေဟာ Network နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Security ပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းတဲ့ လမ်းကြောင်းကနေ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက် တာမို့လို့ သူ့ကို ကာကွယ်မယ် ဆိုရင် firewall နဲ့ ပေးထားဖို့ antivirus software ကို ပုံမှန် Update ပေးပြီး သုံးဖို့ စသဖြင့် လိုအပ်ပါတယ်။
အဲတော့ ကျွန်တော်တို့ viruses, spyware, scareware, trojans, နဲ့ worms တွေ အကြောင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တော်တော် များများလည်း သတိထားမိပြီ - ဘယ်လို ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ Concepts လေးလည်း ချိတ်မိပြီ - ဒါပေမယ့် မပြီးသေးပါဘူး - နောက်ထပ် သိထားသင့်တာလေးတွေ ကျန်ပါသေးတယ် - အဲ့ဒီ့ အကြောင်းအရာကိုတော့ နောက်နေ့ ဆက်ပါ့မယ်။
Last edited by KznT; 06-02-2011 at 11:01 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 47 ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုကိုသီဟ, ကိုစံငြိမ်း, ကိုဖြိုးငြိမ်း, ခင်မေခ, ချယ်ရီမင်း, ဂတုံးလေး, ဆန်းမောင်, နုဝါ, ပုထုဇဉ်, ရှမ်းမလေး, ဝင်းကျော်ဦး, ဝင်းအောင်, သက်ပိုင်ဦး, သန့်ဇင်ဌေး, ဟန်မိုးလွင်, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဇော်ရဲပိုင်, တေဇာလွင်, မောင်ပေါ်ဦး, သေးသေးလေး, အောင်လွင်ဦး, နိုးတူး, arkaraung, aungzawlin, AZM, blackNwhite, bonge, daya, g00gle, hellboy, hightechkey, ko lin, ko myo, kozaw.dagon, kwarsi, moe_poung, nightman, PyaitSone, shwemyay, smlat88, thura.it, tu tu, yawnathan, Ye Aung, zaw myint naing, zaya007, zo
ပြန်စာ - Virus အမျိုးအစားများနှင့် Virus ကာကွယ်နည
အေးဗျာ။ ကျွန်တော့်ကိုလည်း တစ်ခုကူညီပါဦး။ ကျွန်တော် က Kav2011 လိုင်စင်နဲ့သုံးပါတယ်။ နေ့စဉ် Update လုပ်ပြီး အမြဲ Update ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ကျွန်တော့ရဲ့ Kav11 က ရှိသမျှဖိုင်တွေမှာ Email-Worm.Win32.Runouce.b ရှိနေတယ်လို့ပဲပြောနေတယ်။ Email-Worm.Win32.Runouce.b ကကွန်ပျူတာကို ဘာဒုက္ခမှမပေးပါဘူး။ အစကတော့ သူပြောတဲ့Email-Worm.Win32.Runouce.b ကို Disinfect လုပ်လည်းမရ၊ Delete လုပ်လည်းမရ၊ Ignore လုပ်လည်းမရတာနဲ့ အဲဒီဖိုင်ကို ဖျက်ပစ်လိုက်တယ်။ ဖျက်လိုက်တော့ နောက်တစ်ဖိုင်မှာရှိတယ်ထပ်ပြောတယ်။ သူပြောတိုင်းသာလိုက်ဖျက်နေရရင်တော့ စက်ထဲရှိသမျှဖိုင်ကုန်သွားမယ်။ နောက်ဆုံး Kav11 ကို ဖျက်မှပဲ ကိစ္စပြီးတော့မယ်ထင်တယ်။
သေးသေးလေး, AZM, ko lin
ဒီနေ့ ဒီအကြောင်းကို ကိုအောင်လွင်ဦး မေးခွန်းလေးနဲ့ ဆက်သွားလိုက်ပါ့မယ်။
အေးဗျာ။ ကျွန်တော့်ကိုလည်း တစ်ခုကူညီပါဦး။ ကျွန်တော် က Kav2011 လိုင်စင်နဲ့သုံးပါတယ်။ နေ့စဉ် Update လုပ်ပြီး အမြဲ Update ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ကျွန်တော့ရဲ့ Kav11 က ရှိသမျှဖိုင်တွေမှာ Email-Worm.Win32.Runouce.b ရှိနေတယ်လို့ပဲပြောနေတယ်။ Email-Worm.Win32.Runouce.b ကကွန်ပျူတာကို ဘာဒုက္ခမှမပေးပါဘူး။ အစကတော့ သူပြောတဲ့Email-Worm.Win32.Runouce.b ကို Disinfect လုပ်လည်းမရ၊ Delete လုပ်လည်းမရ၊ Ignore လုပ်လည်းမရတာနဲ့ အဲဒီဖိုင်ကို ဖျက်ပစ်လိုက်တယ်။ ဖျက်လိုက်တော့ နောက်တစ်ဖိုင်မှာရှိတယ် ထပ်ပြောတယ်။ သူပြောတိုင်းသာလိုက်ဖျက်နေရရင်တော့ စက်ထဲရှိသမျှဖိုင်ကုန်သွားမယ်။ နောက်ဆုံး Kav11 ကို ဖျက်မှပဲ ကိစ္စပြီးတော့မယ်ထင်တယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ ကိုအောင်လွင်ဦး - ကျွန်တော် အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီးသလိုပဲ MalwareBytes - SuperAntiSpyware ကို သုံးပြီး စမ်းကြည့် စေချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရမရတော့ ကျွန်တော်လည်း သိပ်တော့ မသေချာပါဘူး - ဒါပေမယ့် ဖြေရှင်းလို့ ရကောင်းရနိုင်မယ့် နောက်နည်းလမ်း တစ်မျိုးတော့ ရှိပါသေးတယ်။ အဲတာကို ဒီအောက်မှာ ဖော်ပြမယ့် အပေါ် Topic က အဆက်ကို ဆက်ဖတ်ကြည့်ပေးပါ - နောက်ဆုံး ဘယ်လို ဖြေရှင်းလို့ရမှန်း အဖြေမထွက်ရင်တောင် နောက်ကို ဘယ်လို ကာကွယ်ရမယ် ဆိုတာ အတွေးတစ်ခုလောက်တော့ ရနိုင်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဟိုတစ်နေ့က viruses, spyware, scareware, trojans, နဲ့ worms တွေ အကြောင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တော်တော် များများ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ အခုလည်း ကိုအောင်လွင်ဦးက မေးပြီ Email-Worm တစ်ခုအကြောင်း - မှန်ရာပြောရရင် ကျွန်တော်လည်း Email-Worm.Win32.Runouce.b ဆိုတာနဲ့ မရင်းနှီးဘူး - တစ်ခါမှလည်း အဝင်မခံခဲ့ရဘူးသလို တစ်ခါမှလည်း Email-Worm.Win32.Runouce.b နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဖြေရှင်းမပေးခဲ့ဖူးဘူး - ဒါပေမယ့် viruses, spyware, scareware, trojans, နဲ့ worms ဘယ်လိုဟာမျိုးပဲ စက်ထဲကို ဝင်ဝင် - ကျွန်တော်တို့ အများဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်တာ သက်ဆိုင်ရာ antivirus ကို Update ပေးပြီး Fullscan run ဖို့ - နောက် မရသေးရင် အပေါ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ MalwareBytes - SuperAntiSpyware ဆိုတာတွေ သုံးပြီး စစ်မယ် - အဲတာမှ မရသေးရင် အင်တာနက်ထဲ ကိုယ့်လိုမျိုး ဘယ်သူတွေ ဒီ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖူးပြီလဲ Google ကနေ လိုက်ရှာမယ် - သူတို့ရှာတွေ့ထားတဲ့ ဖြေရှင်းနည်းလေးတွေ နဲ့ လိုက်စမ်းကြည့်မယ်။ ဒီအဆင့်တွေ အကုန်လုံးက ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် အဆုံးစွန်ဆုံး ဖြေရှင်းနည်းပါပဲ -
အဲတော့ ဟုတ်ပြီ - ကျွန်တော် အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ နည်းတွေက ရချင်လည်း ရမယ် - ရချင်မှလည်း ရမယ် - ဒါပေမယ့် ဒီဖြစ်ရပ်မျိုး နောက်တစ်ကြိမ် ထပ် မဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့ ဒီ ဥပမာကနေ အဖြေထုတ်လို့ ရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့တွေက ကွန်ပြူတာသုံးရင် Antivirus သုံးရမယ် ဆိုတာ လူတိုင်း အခြေခံအားဖြင့် သိတယ် - ဒါပေမယ့် ကိုယ်သုံးတဲ့ Antivirus ဆိုတာ Products တစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဘယ်သူမှလည်း လေ့လာဖို့ စိတ်မဝင်စားကြသလို - သက်ဆိုင်ရာ Antivirus ကုမ္ပဏီ အသီးသီးက ထုတ်တဲ့ Antivirus Products အသီးသီးရဲ့ ကွဲပြားခြားနားပုံနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အကြောင်းကိုလည်း လေ့လာဖို့ ဘယ်သူမှ စိတ်မဝင်စားကြဘူး - တစ်ချို့ကတော့ ဒီလိုရှိတယ် ဆိုတာကို မသိတာ - အဲတော့ ကျွန်တော် လောလောဆယ် Kaspersky Lab ကနေ ထုတ်တဲ့ Kaspersky Products တွေရဲ့ ကွာခြားချက်တွေကို အကျဉ်းမိတ်ဆက် ပေးပါ့မယ်။
ကျွန်တော်တို့ Kaspersky လို့ ပြောလိုက်ရင် တစ်ချို့က Kaspersky Antivirus ကိုပဲ သိကြတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ Kaspersky မှာ Kaspersky Antivirus - Kaspersky Internet Security ဆိုပြီး နှစ်မျိုး ရှိတယ် ဆိုတာလောက်ထိ သိကြတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းမှာ Kasperky Pure ဆိုပြီး ထပ်ပေါ်နေတာ တော်တော်များများ ဘယ်သူမှ မသိကြသေးဘူး - သိတဲ့သူလည်း ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချို့ကျတော့ Norton - အဲမှာ လူတော်တော်များများက Norton မှာ Norton™ AntiVirus ရှိတာသိကြတယ် - တစ်ချို့ကတော့ Norton မှာမှ Norton™ Internet Security နဲ့ Norton™ AntiVirus နှစ်မျိုး ရှိတယ် ဆိုတာလောက်ထိ သိကြတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း ထပ်ပေါ်လာတဲ့ Norton 360™ Version ဆိုတာကိုကျ တော်တော်များများ မသိကြတော့ဘူး -
Internet Security နဲ့ Antivirus ဘာကွာသလဲ ??
ကျွန်တော် ပြောချင်တာက ဒီ Products တွေ ရှိနေတာကို သိတာ မသိတာကို အဓိက ဆိုလိုချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး - ဒီ Products တွေ ရှိတာ သိပြီ - ဟုတ်ပြီ - ဒါပေမယ့်
အဲ့ Products တွေက တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ဘာကွာလဲ ?? ဆိုလိုတာ Kaspersky Antivirus နဲ့ Kaspersky Internet Security မှာ Kaspersky Antivirus က ဘာလုပ်ပြီး - Kaspersky Internet Security က ဘာတွေ လုပ်လဲ ?? ဘယ်ကောင်က ဘာအတွက်သုံးပြီး ဘယ်ကောင်က ဘယ်လိုလူမျိုးအတွက် ပို အသုံးတည့်သလဲ ?? ဘယ်လို စက်မျိုးမှာ ဘယ် Products ကို ပိုသုံးသင့်လဲ ??
ဒီထူးခြားချက်တွေကို စဉ်းစားခဲ့ကြဖူးပါသလား ?? သိတဲ့သူလည်း ရှိမယ် - တစ်ချို့ကျ ဒါကို သိပ် အလေးထား မစဉ်းစားကြဘူး - Antivirus တင်ဆို တွေ့ရာ Antivirus တစ်ခု ကောက်တင်လိုက်ရင် တာဝန်ကျေပြီ ဆိုပြီး ထင်ကြတယ်။ ကျွန်တော့် အကိုတစ်ယောက် ရှိတယ် - မြန်မာနိုင်ငံမှာ - တစ်ချိန်လုံး သူ့စက်က Virus ပတ်ကိုက်ခံနေရတာ - ဘာ Antivirus သုံးလည်း မေးရင် ကြုံတာ သုံးတယ် - Update ဆို ဘယ်တော့မှ မပေးဘူး - ၂ လတစ်ခါလောက်ပဲ သူပေးတယ် - သူက Kaspersky သမား - Kaspersky Antivirus နဲ့ Kaspersky Internet Security ဘယ်ဟာသုံးလဲ မေးရင် သူနားမလည်ဘူး - ဘာကွာမှန်းလည်း မသိဘူး - သူတို့နှစ်ခု Antivirus ချင်း တူတူပဲ မဟုတ်ဘူးလားလို့ ပြန်မေးတယ် - ဒါ ကျွန်တော့်ကိုယ်တွေ့ပါ။
Antivirus သုံးမယ်သူ တစ်ယောက်က ဒီလို မဖြစ်သင့်ပါဘူး - ကိုယ်သုံးမယ့် Antivirus မှာ Products ဘယ်နမျိုးရှိသလဲ ?? သူတို့တွေက ဘာကွာသလဲ - ကိုယ်က ကွန်ပြူတာကို အလှသုံးတာလား ?? ဒါမှမဟုတ် တွေ့သမျှ Websites အကုန်ဝင် - ထွက်သမျှ Software အကုန်တင် ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ သုံးတာလား ?? ကိုယ့်စက်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ လတ်တလော ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Antivirus ကတောင်းတဲ့ System Requirements နဲ့ကရော ကိုက်ရဲ့လား - ဒါမျိုးလေးတွေ Antivirus တစ်ခု ကိုယ့်စက်ထဲ မတင်ခင်မှာ စဉ်းစားဖို့ လိုပါတယ်။
ဆိုကြပါစို့ Kaspersky Internet Security မှာဆိုရင် Kaspersky anti-virus မှာမပါတဲ့ features တွေ တော်တော်များများ ပိုပြီး ပါဝင်ပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် virtual keyboard - Blocks spam - Detects rootkits - Blocks Malicious changes to Applications - Built in Intrusion Prevention System နဲ့ နောက် Worm တွေရန်ကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ နှစ်ထပ်ကာရံ firewall system - ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်က ကွန်ပြူတာကို အလှသုံးတာ မဟုတ်ဘူး - တွေ့သမျှ Websites အကုန်ဝင် - ထွက်သမျှ Software အကုန်တင် ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ သုံးတတ်တယ် - Email Attachments တွေလည်း မကြာခဏ လာလေ့ ရှိပြီး သူတို့တွေနဲ့လည်း မပြတ်တမ်း ပတ်သတ်နေရတယ် - နောက်ပြီး ကိုယ့် Network ကလည်း သိပ်လုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိဘူး ဆိုရင် Kaspersky anti-virus သုံးမယ့် အစား Kaspersky Internet Security သုံးသင့်ပါတယ်။ Kaspersky Internet Security Suite က ကျွန်တော်တို့အတွက် လိုအပ်သမျှ security ကို ဘက်စုံထောင့်စုံကနေ နောက်လှည့်ကြည့်စရာ မလိုပဲ သူက ကာကွယ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ Kaspersky Internet Security ထက်ကောင်းတာ ဆိုရင် သူ့နောက်မှာ ပေါ်လာတဲ့ Kasperky Pure ! သူတို့တွေရဲ့ အသေးစိတ် ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ security နှိုင်းယှဉ်ချက်တွေကို ဒီနေရာမှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အဲတော့ မေးစရာ တစ်ခု ပေါ်လာတယ် - Kaspersky Internet Security နဲ့ Kasperky Pure က ပိုကောင်းတယ်ဆိုရင် Kaspersky anti-virus က ဘာလို့ ထုတ်နေရသေးတုန်း - လူတိုင်းက Kaspersky Internet Security နဲ့ Kasperky Pure ပဲ ပိုသုံးကြတော့မှာပေါ့လို့ မေးစရာ ရှိလာပါတယ်။ အဲလိုလည်း မဟုတ်သေးပါဘူး - Kaspersky Internet Security နဲ့ Kasperky Pure ဟာပိုကောင်းတာ မှန်ပေမယ်လို့ သူတို့တွေမှာပါတဲ့ features တွေ security တွေ ကောင်းလာတာနဲ့ အမျှ ကိုယ့် System Resources ကို ပိုပြီး သုံးလာတတ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက Kaspersky Internet Security နဲ့ Kasperky Pure တို့ သုံးမယ် ဆိုရင် Hardware performance ကောင်းတဲ့ Computer တွေမှာ ဘာမှ သိပ်မသိသာပေမယ့် - Hardware performance နိမ့်တဲ့ Computer မျိုးတွေမှာ စက်ကြီးက အထနှေး အထွက်နှေး ဖြစ်လာမယ် - Applications တစ်ခုခု ဖွင့်ရင် Loading လုပ်တာ ကြာလာမယ် - Windows အတက်တွေမှာ တော်တော်ကြီး နှေးသွားမယ် - ဒါမျိုးတွေ ဖြစ်လာပါမယ်။ နောက်ပြီး Kaspersky Internet Security နဲ့ Kasperky Pure ဆိုတာမျိုးက ကွန်ပြူတာကို အလှသုံးတဲ့ သူမျိုးတွေ - ဆိုလိုတာ အိမ်မှာ Laptop ထားထားပြီး Internet လည်း မရှိ - Network လည်း မသွယ် - တစ်နေ့နေလို့ အလုပ်ပြန်လာမှ တစ်ခါလောက်ဖွင့်ပြီး စာစီစာရိုက်လောက် လုပ်တဲ့ ကွန်ပြူတာမျိုးတွေမှာကျတော့ သုံးဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး - အဲလို ကွန်ပြူတာမျိုးတွေမှာက Kaspersky Internet Security နဲ့ Kasperky Pure ကိုသုံးတာမျိုးထက် Kaspersky Antivirus လေးတင် တစ်ပတ် တစ်ခါလောက် Update ပေးပြီး သုံးတာ ပိုပြီး စက်ပေါ့သလို သုံးရတာလည်း သွက်စေပါတယ်။
ဒါက Kaspersky နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး Antivirus Products ရွေးချယ်ပုံကို ပြောပြတာပါ။ တစ်ခြား Kaspersky မဟုတ်တဲ့ Antivirus Products တွေလည်း ခုလို သဘောအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက် Norton - သူ့မှာလည်း Norton Internet Security က Norton AntiVirus ထက်ပိုပြီး firewall တွေ spyware protection တွေနဲ့ Security ပိုကောင်းပါတယ်။ Norton Products တွေရဲ့ ကွာခြားချက်တွေကို ဒီနေရာမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော် နိဂုံးချုပ် အကြံပြုချင်တာက Antivirus Products တွေကို ကိုယ်သုံးမယ့် Field နဲ့ ယှဉ် - Hardware လိုအပ်ချက်နဲ့ ချိန်ညှိပြီး ရွေးသုံးပါ - ဒီလိုဆို ဘယ် Internet Security - Antivirus ပဲ သုံးသုံး စက်က ပေါ့ပါးနေမှာ ဖြစ်သလို - Security ပိုင်း ဆိုင်ရာလည်း အားသာချက်တွေ ရရှိပြီး Virus ဆိုတဲ့ရန်ကနေ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်မြင့်မားမားနဲ့ ကာကွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အဲတော့ ကိုအောင်လွင်ဦးကို တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း အကြံပြုခဲ့ချင်တာ Kaspersky Antivirus အစား Kaspersky Internet Security ကို ပြောင်းသုံးကြည့်ပါလို့ -
ကိုကိုသီဟ, ကိုစံငြိမ်း, ကိုဖြိုးငြိမ်း, ခင်မေခ, ချယ်ရီမင်း, ဂတုံးလေး, စွမ်းကမ္ဘာ, လမင်းမျက်နှာ, ဝင်းအောင်, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဇေယျာအေး, ဇော်ရဲပိုင်, နေကြည်မြူး, မောင်ပေါ်ဦး, အောင်လွင်ဦး, နိုးတူး, arkaraung, aungzawlin, AZM, blackNwhite, bonge, g00gle, hellboy, hightechkey, ko lin, ko myo, kozaw.dagon, kyaukphyu, lu soe, minthike, pannuko, sailay, thura.it, tu tu, Ye Aung, zo
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ Kav11 က နောက်ထပ် ရက် ၂၅၀ လောက်ကျန်ပါသေးတယ်။ Kav11 ရဲ့ Key က Kis11 မှာ အလုပ် လုပ်သလားမလုပ်လား မစမ်းကြည့်ရသေးပါဘူး။ ဒါတောင်ကျွန်တော် စတင်တုန်းက Kav9ရဲ့ Key ကို Kav9 မှာတင်ပြီးမှ Kav11 ကို Install ထပ်လုပ်လိုက်တာ Key အဆင်ပြေသွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ဝယ်ထားတာ3User ပါ။ တင်ထားတဲ့စက်က ကျွန်တော့်ဆီမှာ(၃)လုံး မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဆီမှာ(၃)လုံး နဲ့ နောက်မိတ်ဆွေတစ်ယောက်မှာ(၂)လုံးပါ။ Update လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း တစ်ပြိုင်တည်း စက်(၃)လုံးထက်ပိုပြီး Online Update မလုပ်မိအောင် အထူးစီစဉ်ထားပါတယ်။3User ထက်ပိုပြီး တစ်ပြိုင်တည်း Update လုပ်မိရင် Key Blacklist ဖြစ်မယ်လို့လည်း သိထားပါတယ်။ နောက်မှ ကျွန်တော့်ရဲ့ Kav Key က Kis key မှာ အလုပ် လုပ်/မလုပ် စမ်းကြည့်ပါဦးမယ်။ Kasper Puer တင်ပြီးတော့ ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ Key ကိုစမ်းကြည့်ဖူးပါတယ်။ လက်မခံတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ အောင်လွင်ဦး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
hightechkey, ko lin, KznT, pannuko, phoetharlay
ကျနော်တခုလောက်မေးပရစေ........။ ကျနော်လိုက်ရှာတော့ဖတ်ပါတယ် ဒါပေ့မဲ့ကျနော်ရှာတာမတွေ့မိလို့ပါ.......။
စက်တလုံးမှာ antivirus တမျိုးထက်ပိုသုံးလို့ရမလား........။ ရတယ်ဆိုရင်ဘယ်လို antivirus ကိုတွဲသုံးသင့်ပြီး ဘယ်လိုမျိုးကိုရှောင်သင့်သလဲ.....။ အဲ့လိုတွဲသုံးတဲ့အတွက်အကျိုးရှိနိုင်လား....။ အပြစ်ကပိုများစေလား........။ antivirus တခုရဲ့အားနည်းချက်ကိုတခုကဖြည့်ပေးတာမျိုးရောဖြစ်စေလား........။မိသားစုဝင်မောင်နှများပြော
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ နေကြည်မြူး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စက်တလုံးမှာ antivirus တမျိုးထက်ပိုသုံးရင်မကောင်းပါတယ် စက်လေးလံစေပါတယ် တစ်ခုတည်းထည့်ထားရင် တောင်updateဖြစ်တဲ့ဟာတွေအမြဲ ရမ်းနေတဲ့ အတွက် စက်အစဖွင့်မှာ လေးတာတို့ဘာဖို့ဖြစ်စေပါတယ် နောက်ပြီး Kaspersky Antivirus မျိုးရင် သူကိုထည့်ထာရင်တစ်ခြား Antivirus ထည့်လို့မရပါဘူး စက်တလုံးမှာ antivirus တမျိုးထက်ပိုထည့်လို့မရဘုးရယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး မထည့်သင့်ပါဘူး
ကိုယ်စက် လုံခြုံမူမရှိဘူုးလို့ထင်ရင်တော့ ကောင်းတဲ့ antivirus တွေကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုပါ Kaspersky Antivirus
ကတော့အကောင်းဆုံးလို့ထင်ပါတယ် ကျွန်တော်လဲ Kaspersky Antivirus သုံးဖြစ်လို့ပါ။
Antivirus Software တွေကို ဘယ်လိုရွေးချယ် အသုံးပြုသင့်သလဲ
စွမ်းကမ္ဘာ, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, နေမင်းမောင်, နေကြည်မြူး, bonge, ko lin, KznT
notepad နဲ့ရေးတဲ့ Virus တွေကို ဘယ် Antivirus ကမှ မသိပါဘူး။ ဒါဆိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ .exe , .bat ဖိုင်တွေကို icon changer လို software တွေသုံးပြီး icon ပြောင်းထားမယ်ဆိုရင် တကယ် software တစ်ခုလို့ထင်ပြီး run မိမှာပါ။ ဒါဆို Virus ဘာလဲဆိုတာလဲ သိပြီဖြစ်လို့၊ ဘာတွေရေးထားတာလဲ သိရင် run ပါ့တော့မလား။ notepad နဲ့ ရေးထားတဲ့ virus တွေ ကို ဘာတွေရေးထားတယ်ဆိုတာ သိနိုင်တဲ့နည်းပြောပြပါ့မယ်။
notepad အသစ်လေးတစ်ခု ယူပြီး virus ဖိုင် တစ်ခုကို Drag ဆွဲထည့်ကြည့်ပါ။
ဘာတွေရေးထားလဲဆိုတာ သူရေးထားတဲ့ အတိုင်း တစ်သွေမတိမ်းပေါ်ပါတယ်။
မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ ။ ကျနော်ဆီလာပေးရင် မြင်ဘူးပြီးသားဆိုရင် ဖြတ်လိုက်ပါမယ်။ မမြင်ဘူးသေးတဲ့ စာသားဆိုရင်တော့ ရေးနည်းနောက်တစ်မျိုးပါ ရလိုက်ပြန်ပြီပေါ့။
( File တစ်ခု send ပေးလိုက်ရင် run ရမှာ ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက်ပါ။ အခုချိန်က စပြီး ပေးလာသမျှကို အားရ၀မ်းသာ ယူလိုက်ပါ။ ပညာတောင်ပိုရမှာပါ။ )
Last edited by မောင်ပေါ်ဦး; 18-10-2010 at 11:36 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ မောင်ပေါ်ဦး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုကိုသီဟ, ချစ်သမီး, စွမ်းကမ္ဘာ, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, နေမင်းမောင်, သေးသေးလေး, နိုးတူး, bonge, daya, g00gle, KznT, nightman, phoetharlay
ကျွန်တော်စက် recycler and system volume information virus တက်နေပါတယ်..။ သူက စက်စတက်ရင် keyboard ကို ပိတ်ထားပါတယ်.။ Kaizer killer အပါအ၀င်၊ တခြား သတ်နည်း တွေနဲ့ သတ်လည်း ဖယ်ရှားလို့မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်..။ ဖိုရမ်ထဲမှာရှိတဲ့ နည်းတွေနဲ့ စမ်းပြီးပါပြီ ..။ သတ်လို့မရသေးလို့ပါ..။
Removal tool (သို့) သူ့ကို သတ်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းလေးရှိရင် မစ ပါဦးခင်ဗျာ..။
Last edited by Hlwamkoko; 03-11-2010 at 10:57 AM..
အကို ရေကျွန်တော်သိပ်တော့မသိပါဘူး ဒါပေမဲ့ ဖိုရမ်က ညီအကိုမောင်နှမများဆွေးနွေးထားတာများထဲ မှ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာတွေကို ကောက်နုတ်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ် အဆင်ပြေပါစေနော်
ဒီဟာလေးနဲ့သတ်ကြည့်ပါ ပေးပါ Necz™ Virus Removal Tool
recycle နဲ့ system volume information သတ်နည်း
ဒီ virus ကို ဘယ်လိုသတ်ရမလဲ
စွမ်းကမ္ဘာ, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, နေမင်းမောင်, သေးသေးလေး, Hlwamkoko, phoetharlay
အကို ရေ... ကျေးဇူးတင်ပေမဲ့ ...
သတ်လို့မရသေးပါဘူး ကူညီနိုင်သူများ ထပ်မံကူညီပေးပါ..။
တွေ့နေတာတော့ ကြာပါပြီ - ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်က Virus သတ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ ပတ်သတ်ရင် ကြိုတင်ကာကွယ် တာက လွဲလို့ တကယ်လို့ Virus ကိုက်ပြီ ဆိုရင်လည်း Virus သတ်နည်းကို အင်တာနက်ထဲ လိုက်ရှာပြီး တွေ့တာကို အကြံပေးယုံလောက်ပဲ တတ်နိုင်ပါတယ်။ ခုလည်း ကိုညီနေမင်း ဆိုဒ်မှာ Recycler virus ကို ဘယ်လို သတ်မလဲ ဆိုတာ အသင့်ရေးထားတာလေး တွေ့လို့ လက်တို့လိုက်ပါတယ်။ မှတ်ချက် ရေးသူများကတော့ အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း ရေးသွားကြတာ တွေ့ပါတယ်။ စမ်းကြည့်ပါဦး -
ပို့စ် 17 ခုအတွက် 63 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အခု ဘာ Virus အသစ်ထွက်နေလဲဟင် ကျနော်က Virus ဆိုရင် စိတ်ဝင်စားလို့ပါ ပြီးတော့ Virus ရဲ့ အကြောင်းကို
အစ်ကိုတို့ ရဲ့အကြံအဥာဏ်တွေကို မျော်လျက်
ညဆိုလျှောက်လို့သာ လည်ချင် နေ့ကို မုန်းတဲ့စိတ်ဝင်
ကိုKznt ရေ folder တွေကို .exe ဖိုင်ပြောင်းပစ်လိုက်လို့ပါ
ဗိုင်းရပ်အမျိုးအစား သတ်နည်းလေး ကူညီပေးကြပါဦးဗျာ
အရေးကြီးတဲ့ စာရင်းဖိုင်တွေမို့ ငိုချင်လာပြီနော်
အကိုရေ အောက်ကလင့်လေးတွေမှာကြည့်ပေးပါနော် အဆင်ပြေပါစေနော် .exe ဗိုင်းရပ်အမျိုးအစား သတ်နည်းလေး
Folder name.exe ဖိုင်းရပ်ကိုက်နေလို့ပါ
arkaraung, aungzawoopde, bonge, KznT
ကျွန်တော်လည်း ဒီမှာ ကြုံနေတဲ့ virus တစ်မျိုး အကြောင်း မေးချင်ပါတယ်... ဒီတစ်ခေါက် virus ကတော်တော်လေး ထူးဆန်းတယ်.. ကျွန်တော် စက်မှာဆိုရင် hidden file ကော၊ system hidden ကော၊ extension ကော ဖော်ထားတယ်.. usb disk security လည်း တင်ထားတယ်... ဘယ် antivirus မှတော့ သုံးမထားဘူး... Flashy ဆန်ဆန် folder.exe virus မျိုးတွေကတော့ ကိုယ်ဘာသာကိုယ်ပဲ stick သုံးရင် သတိထားပြီး မ၀င်အောင် သုံးတယ်... ဒီ တစ်ခေါက် virus ကတော့ ဘယ်လို ဘယ်ပုံ ကူးစက်သွားတယ် ဆိုတာ အစ ရှာလို့ကို မရသေးဘူး...
ကျွန်တော် ဒီ Virus ကူးသွားရင် ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်လဲ ဆိုတော့ Window စအတက် logon အ၀င် user account ရွေးတဲ့ page ပုံစံပြောင်းသွားတယ်... ပြောင်းသွားတာက အရင်လို account လေးကို click လုပ်ပြီး ၀င်လို့ မရတော့ပဲ ကျွန်တော်တို့ ctrl+alt+del နှစ်ခါက်နှိပ်ပြီး user name နဲ့ password တောင်းတဲ့ dialog ပုံစံ ဖြစ်သွားတယ်.. အဲဒီ ပုံစံနဲ့ logon ၀င်လိုက်ရင် ဘာမှတက်မလာတော့ဘူး... explorer.exe မ run တဲ့ပုံစံ... ctrl+alt+del နှိပ်ရင်တော့ taskmanager ပေါ်လာတယ်.. အဲဒီကနေ explorer.exe run ရင် ရတဲ့အခါ ရတယ်... မရတဲ့ အခါ မရဘူး... virus ကူးပြီးကာစ ဆိုရင်တော့ safe mode ကနေ system restore ပြန်လုပ်လို့ ရတယ်... နဲနဲ ကြာသွားရင်တော့ restore point တွေလည်း မရှိတော့ဘူး... restore လုပ်ပြီးလည်း ခဏပဲ အဆင်ပြေတယ်... နောက် ၃ ၊ ၄ ရက်လောက်နေရင် ပြန်ဖြစ်တာပဲ... ကျွန်တော် ဒီ virus ရှိတဲ့ စက်ထဲက ဖိုင်တွေကို stick နဲ့ virus မရှိတဲ့ တခြားစက်ထဲကို ကူးတယ်... stick ထဲမှာလဲ hidden ဖြစ်နေတာတွေ မတွေ့မိဘူး.. နောက်ပြီး ဖိုင်ကူးထားတဲ့ စက်ထဲမှာလဲ virus ကူးတဲ့ ပုံစံ မတွေ့ရဘူး... ဒါပေမယ့် အဲဒီ ကူးထားတဲ့ ဖိုင်တွေထဲ က exe တစ်ဖိုင်လောက်ကို run လိုက်ရင်တော့ အဲဒီ စက်ကို ကူးသွားတယ် ထင်တာပဲ.. ကျွန်တော်တို့ ရုံးမှာ စက် ၅ လုံးလောက် ရှိတာ အကုန်လုံးနီးပါး အဲဒီ virus ကိုက်နေတယ်... နောက်ထူးဆန်းတာက format ချပြီး window ပြန်တင်လဲ ခဏပဲ ရတယ်.. အဲဒီ window အသစ်အတွက် software တွေ install ပြန်လုပ်ရင် ကူးသွားတယ်လို့ ယူဆရတာပဲ...
ကျွန်တော်လည်း ဒီ virus နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘာလုပ်ရမှန်းကို မသိတော့ဘူး.. ကျွန်တော် သိချင်တာက ဒီ virus က ဘယ်လို virus မျိုးလဲ... manual ဘယ်လို သတ်လို့ ရနိုင်မလဲ... manual မရရင်လည်း ဘယ် antivirus က သိနိုင်လောက်လဲ.. ကျွန်တော်က antivirus ဆိုရင် လေးလွန်းလို့ရယ်၊ ကိုယ့်စက်ထဲက တစ်ချို့ဖိုင်တွေကို ပြင်ပစ်လို့ သိပ်မသုံးချင်ဘူး... ဒါကြောင့် virus မ၀င်အောင် သတိထားတယ်... တစ်ချို့ virus မျိုးတွေက OK CD လိုမျိုးနဲ့ ရှင်းလိုက်တာ များတယ်... ဒီ virus နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အကြံညဏ်လေး ပေးကြပါဦး... အားလုံးကို ကျေးဇူးပါနော်...
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ hightechkey အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စွမ်းကမ္ဘာ, arkaraung, zo
ဟုတ်ကဲ့ မေးထားတာတော့ ကြာပြီ - တစ်ခြား ကိစ္စလေးတွေနဲ့ မအားလို့ ချက်ချင်း မဖြေဖြစ်တာပါ - ကို High Tech နားလည်ပေးနိုင်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ် - Virus နဲ့ ပတ်သတ်ရင် ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ မကူးစက်ရအောင် ဘယ်လို ကာကွယ်ပါ ဆိုတာလောက်ပဲ အကြံပြုနိုင်ပါတယ် - ထွက်သမျှ Virus ကို သတ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းမျိုးတော့ ကျွန်တော်မှာ မရှိသေးပါဘူး -
ဒီနေရာမှာ တစ်ခု အံ့သြမိတာ ကို High Tech က Antivirus မသုံးဘူး ဆိုတဲ့ စကားပါ -
ကျွန်တော် စက်မှာဆိုရင် hidden file ကော၊ system hidden ကော၊ extension ကော ဖော်ထားတယ်.. usb disk security လည်း တင်ထားတယ်... ဘယ် antivirus မှတော့ သုံးမထားဘူး... Flashy ဆန်ဆန် folder.exe virus မျိုးတွေကတော့ ကိုယ်ဘာသာကိုယ်ပဲ stick သုံးရင် သတိထားပြီး မ၀င်အောင် သုံးတယ်... ဒီ တစ်ခေါက် virus ကတော့ ဘယ်လို ဘယ်ပုံ ကူးစက်သွားတယ် ဆိုတာ အစ ရှာလို့ကို မရသေးဘူး...
Virus တစ်ခုရဲ့ တည်ဆောက်ပုံဟာ သူ့ကို ရေးတဲ့ Programmer က ဘယ်လောက် ကျွမ်းကျင် အသေးစိတ်သလဲ ဆိုတာပေါ် မူတည်ပြီး effect ရှိပါတယ် - Antivirus ဘယ်လောက် ကောင်းကောင်း တကယ်တမ်း Virus တစ်ခု အဖျက်စွမ်းအား ကြီးပြီ ဆိုပြီရင် တော်ယုံ ဘယ် Antivirus မှ သတ်လို့ မနိုင်ကြပါဘူး - ဒါ့ကြောင့် ဘာ Antivirus မှ မသုံးထားဘူးဆိုရင် ဘယ်လောက်ပဲ ဂရုစိုက် သုံးပါတယ် ပြောပြော ကိုယ့်ကြောင့် မဟုတ်တောင် ဘေးလူ တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ ပယောဂကြောင့် Virus ဆိုတာ ဝင်ကောင်းဝင်လာ နိုင်ပါတယ် - နောက်ပြီး usb ကမှ မဟုတ်ပဲ တစ်ခြား နည်လမ်း အမျိုးမျိုးနဲ့ Virus ကလည်း ဝင်နိုင်ပါသေးတယ် - တစ်ချို့ Virus တွေက အပျော်သဘောမျိုး ရေးထားတာမို့လို့ Code တွေအကြောင်း နားလည်တဲ့ Programmers တွေက ဖြေဆေးသဘောမျိုး ပြန်ရှာပေးနိုင်ပေမယ့် တကယ်တမ်း Virus အကိုက်ခံရပြီ ဆိုရင် အနာနဲ့ဆေး ကွက်တိတိုးဖို့က အရမ်းရှာရခက်ပါတယ် - ဒါ့ကြောင့် ပထမဆုံး အချက်အနေနဲ့ အကြံပြုလိုတာ Antivirus တစ်မျိုးမျိုးကို ကိုယ့်စက်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ် လိုက်ပြီး သုံးဖြစ်အောင် သုံးစေချင်ပါတယ် -
virus ကူးပြီးကာစ ဆိုရင်တော့ safe mode ကနေ system restore ပြန်လုပ်လို့ ရတယ်... နဲနဲ ကြာသွားရင်တော့ restore point တွေလည်း မရှိတော့ဘူး... restore လုပ်ပြီးလည်း ခဏပဲ အဆင်ပြေတယ်... နောက် ၃ ၊ ၄ ရက်လောက်နေရင် ပြန်ဖြစ်တာပဲ...
Virus ကူးစက်ခံရပြီးတဲ့ ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးဟာ system restore ပြန်လုပ်လည်း မထူးပါဘူး - ဘာကြောင့်လည်းဆို Virus တစ်ခုကို ရေးပြီ ဆိုတည်းက Programmers တွေဟာ သူရေးတဲ့ Virus ကို တစ်ယောက်ယောက် အကိုက်ခံရရင် လူတိုင်း system restore ပြန်လုပ်ကြမယ်ဆိုတာ သိပြီးသားမို့လို့ system restore points တွေထားတဲ့ ဖိုင်တွေထဲမှာကို သူ့ Virus ကို နေရာယူပြီးသား ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ထားပြီးသား ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် - တစ်ချို့ကတော့ Virus ကို အပျော်သဘောမျိုး ရေးတာမို့လို့ Virus ကိုက်ခံရရင် system restore ပြန်ပေးတဲ့ အခါ ကောင်းသွားတာမျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ် - ဒီ့ထက် အဆင့်မြင့်လာရင် Virus ရေးတဲ့ Programmers တွေက system restore points တွေကို ဖျောက်ထားမယ် - System restore ကို Start > all programs ကနေ ပြန်ခေါ်လို့ မရအောင် လုပ်ထားမယ် - အဲလိုမရရင် လူတိုင်းက Safe mode ဆိုတာ သိတယ် - အဲတော့ Safe mode ထဲကနေ System restore လုပ်မရအောင်ပါ Program ရေးထားမယ် - နောက်ဆုံး Safe mode ထဲဝင်မရအောင်ပါ လုပ်ပစ်လိုက်တယ် - စသဖြင့် Virus ကို ရေးထားတဲ့ Programmers ရဲ့ အသေးစိတ် ပြင်ဆင်မှုကို လိုက်ပြီး Virus တွေက ဖျက်စွမ်းအား ကြီးမားကြပါတယ် -
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အဲလို ဖော်ပြခဲ့တဲ့ Virus မျိုး ကိုက်ခံရခဲ့ဖူးတယ် - ကို High Tech ပြောခဲ့သလို System restore ပေးတယ် မရဘူး - Windows အသစ်ပြန်တင်တယ် မရဘူး - စိတ်က အဲ့တုန်းက ထင်ခဲ့တာ Windows ပြန်တင်လိုက်ရင် ကောင်းသွားမယ်ထင်တာ - တကယ်တော့ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့ပြီးသလို Virus ရေးသူက အသေးစိတ်ရင် စိတ်သလို Virus တစ်ခုရဲ့ နေရာယူမှုကလည်း ပိုပြီး နက်နဲတတ်ပါတယ် - အဲလို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲ သတ်သတ် Virus ကမသေတော့ဘူး ဆိုရင် နောက်ဆုံး လုပ်လို့ ရတဲ့ တစ်နည်းက Boot sector ပါ မကျန် အပျောက်ရှင်းရတဲ့ ( High level ) Hard Disk Formatting နဲ့ လုပ်ဆောင်တဲ့နည်းပါ - အလွယ်ပြောရရင်တော့ Windows ရှိနေတဲ့ Partitions တစ်ခုတည်း format ချတာမျိုး မဟုတ်ပဲ Hard disk ပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ Partitions အားလုံးထဲက Data အားလုံး Delete - နောက် Partitions အားလုံး Format ပြန်ချ - Software အားလုံး အသစ်စက်စက် ဒေါင်းလုပ်ချ ပြန်တင်ရမယ့်နည်းပါ - ဒါကို တစ်ချို့က zero level format လို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ် -
နောက်ထူးဆန်းတာက format ချပြီး window ပြန်တင်လဲ ခဏပဲ ရတယ်.. အဲဒီ window အသစ်အတွက် software တွေ install ပြန်လုပ်ရင် ကူးသွားတယ်လို့ ယူဆရတာပဲ...
ကို High Tech ပြောခဲ့သလို window အသစ်အတွက် software တွေ install ပြန်လုပ်တဲ့ နေရာမှာ အရင်ကိုယ့်ဆီမှာ ရှိနေတဲ့ Virus ရှိတယ်လို့ ယူဆကောင်း ယူဆလို့ ရနိုင်တဲ့ စက်တစ်လုံးလုံးက software တွေကို ပြန်မသွင်းပါနဲ့ - မသေချာရင်တောင် အသစ်ကိုပဲ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ အားလုံး Download ပြန်ချသုံးလိုက်ပါ -
ကျွန်တော် သိချင်တာက ဒီ virus က ဘယ်လို virus မျိုးလဲ... manual ဘယ်လို သတ်လို့ ရနိုင်မလဲ... manual မရရင်လည်း ဘယ် antivirus က သိနိုင်လောက်လဲ..
ဒီ virus က ဘယ်လို virus မျိုးလဲ ဆိုတာတော့ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ပြောပြဖို့ ခက်ပါတယ် - အနာသိရင်ဆေးရှိတယ်ဆိုတဲ့ စကားရှိပေမယ့် Virus ဆိုတာ ရေးချင်တဲ့သူက ရေးချင်သလို ရေးပြီး ပေါ်ချင်တဲ့ အချိန်မှာ ပေါ်လာတတ်တာမျိုးမို့လို့ အနာသိတာတောင် ဆေးရှာတွေ့ဖို့က မလွယ်ပါဘူး - manual သတ်ဖို့ နည်းလမ်းကို ကျွန်တော် မချပြနိုင်ပေမယ့် အပြတ်ဖျောက်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကိုတော့ ကျွန်တော် အပေါ်မှာ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပါပြီ - နောက်ဆုံး ဘယ်လိုမှ နည်းလမ်းရှာမတွေ့ရင် ကျွန်တော်ပြောတဲ့ နည်းနဲ့ စမ်းသပ်ကြည့်ပါ
ကျွန်တော်က antivirus ဆိုရင် လေးလွန်းလို့ရယ်၊ ကိုယ့်စက်ထဲက တစ်ချို့ဖိုင်တွေကို ပြင်ပစ်လို့ သိပ်မသုံးချင်ဘူး...
Antivirus တိုင်း မလေးတော့ပါဘူး - ခပ်ပေါ့ပေါ့လေးနဲ့ Security ပိုင်းဆိုင်ရာ အတော်အတန် စိတ်ချရတဲ့ Antivirus တစ်မျိုး ရှိပါတယ် - အဲတာကတော့ Microsoft security essentials ပါ - စိတ်ဝင်စားရင် သုံးကြည့်နိုင်ပါတယ် -
ဒီ virus နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အကြံညဏ်လေး ပေးကြပါဦး...
ဒီအကြောင်းအရာကို MZ မှာလည်း မေးထားတာ တွေ့မိတယ် - MZ က ဖြေပေးမှာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ MF က အကြံပြုတာနဲ့ ပေါင်းရင် အဖြေတစ်ခုတော့ တွေ့လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ် -
Last edited by KznT; 06-02-2011 at 11:02 PM..
စွမ်းကမ္ဘာ, ဆန်းမောင်, မျိုးဟန်ထက်, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, မောင်ပေါ်ဦး, arkaraung, azp09, bonge, hellboy, minthike, tu tu, zo
ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော်ထင်တာပြောကြည့်ရမယ်ဆိုရင် အစ်ကို့စက်က globle.exe(ဒါမှမဟုတ်)explorer.exe ကိုက်နေတယ်ထင်ပါတယ်။
global.exe က Operating System မှာရှိတဲ့ Folder မှန်သမျှကို .exe အဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်ပြီး မူရင်းဖိုင်တွေကိုတော့ hidden file တွေအဖြစ် ပြောင်းပစ်လိုက်ပါတယ်။ အဲအခါ အဲဒီ ".exe"တွေကို ဖွင့်လိုက်ရင် မူရင်းစက်ရှိတဲ့နေရာမှာ ရှိပေမယ့် USB Stick နဲ့ထည့်ပြီး တစ်ခြားစက်မှာ ထည့်လိုက်ရင်တော့ My Document Folder ပဲပွင့်လာပါတော့တယ်။ အဲဒီ Virus စက်ထဲကို ၀င်သွားပြီဆိုရင် Task Manager ရယ် Folder Option ရယ်ကို အဲဒီ Virus ဖျောက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဖျောက်ပစ်လိုက်တဲ့ Folder တွေကို Read Only File အဖြစ်ပြောင်းပစ်လိုက်တဲ့အတွက် Folder Option>View>Hidden Files And Folder>Show Hidden Files, Folder and Drives လုပ်ရုံနဲ့မပေါ်ပါဘူး အဲဒီ Show Hidden Files And Folder အောက်ကထဲက Hide Protected Operating System Files(Recommended) ဆိုတဲ့စာသားကို Checkmark ဖြုတ်ပေးမှ အဲ Folder တွေက ပြန်ပေါ်ပါတယ်။ အဲဒီ Virus ကို သတ်ဖို့ ကျွန်တော်ကတော့ အခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထွက်ထားတဲ့ OK Virus Cleaner CD ကို သုံးပါတယ်
အဲဒီ CD မှာက မြန်မာနိုင်ငံမှာ တော်တော်များများ တွေ့ကြုံနေရတဲ့ Virus တော်တော်များများကို ရှင်းပစ်နိုင်ပါတယ်
အစ်ကိုလည်း သုံးကြည့်ပါ။ အသုံးတော်တော်တည့်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပြီး explorer.exe Virus ရောပေါ့။
အဲဒီ Virus ကကျတော့ OS မှာရှိတဲ့ Folder တွေရဲ့ အဆင့်ပွားတွေအဖြစ် ပွားပစ်ပြီး အနှောင့်အယှက်တော်တော်ဖြစ်စေပါတယ်။
ဥပမာ New Folder ဆိုရင် အဲ Folder ကို ဖွင့်လိုက်ရင် နောက်ထပ် New Folder.exe ဆိုပြီး အဲဒီ Folder ထဲမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
အရှင်းဆုံးကတော့ Virus မ၀င်နိုင်အောင် Anti-virus Program နဲ့ကာကွယ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ လရောင်မြူမှုန် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စွမ်းကမ္ဘာ, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, မောင်ပေါ်ဦး, ငြိမ်းချမ်း, arkaraung, bonge, g00gle, KznT, tu tu
ကျွန်တော့်စက်ထဲမှာ chrome.exe ၀င်နေလို့ပါ..
ပြန်စာ - Virus အမျိုးအစားများနှင့် Virus ကာကွယ်နည
ပြောမယ် ပြောမယ်နဲ့ မပြောဖြစ်သေးတာ - ဗိုင်းရပ်စ် သတ်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဒီ Virus အမျိုးအစားများနှင့် Virus ကာကွယ်နည်းများ ဆိုတဲ့ Thread အောက်မှာ Virus သတ်နည်းတွေ ကျေးဇူးပြုပြီးမမေးကြပါနဲ့ - ဒီ Thread က Virus အမျိုးအစားများနှင့် Virus ကာကွယ်နည်းတွေကို ဗဟုသုတ ဖြစ်အောင် ရေးထားပေးတာပါ - Virus ပြဿနာ ဖြေရှင်းရေး Thread မဟုတ်ပါ - Virus & Anti-virus ပိုင်းဆိုင်ရာ အောက်မှာ Topic အသစ်ထုတ်ပြီး ဖြစ်ဖြစ် - အခြားအခက်အခဲများ ဆိုတဲ့ နေရာအောက်မှာ ဖြစ်ဖြစ် မေးပေးကြပါ - တကယ်လို့ နေရာလွဲနေရင် ကျွန်တော်တို့ ပြန်ပြောင်းပေးပါ့မယ် - ဘာလို့ ခုလို ပြောရလဲ ဆိုရင် Virus ပြဿနာက ဖိုရမ်မှာ မကြာခဏ တက်တယ် - မဆိုင်တဲ့ Thread တွေအောက်ကို မေးမြန်းချက်နဲ့ ဖြေရှင်းနည်းတွေ ဝင်နေရင် အဖြေရှာတဲ့ လူတွေ တွေ့ဖို့လည်း ခက်သလို Thread ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်း ပျက်ပြားစေပါတယ် - ကျေးဇူးပြုပြီး Virus ပြဿနာ မေးမြန်းသူများ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း အဆင်ပြေအောင်၊ နောက်ပိုင်း ပြဿနာကြုံလာမယ့် မိသားစုဝင်များလည်း ရှာဖွေဖြေရှင်းရ လွယ်အောင် ဝိုင်းဝန်းကူညီကြစေချင်ပါတယ် -
Last edited by KznT; 07-02-2011 at 12:30 AM..
ကိုစံငြိမ်း, စွမ်းကမ္ဘာ, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, နေမင်းမောင်, မောင်ပေါ်ဦး, arkaraung, bonge, g00gle, tu tu, zin min aung, zo
Internet နဲ. Viruses, Malwares, Trojans တွေဆိုတာ အီကြာကွေးလိုပဲ တူတူယှဉ်တွဲနေတာပါ။ နေ.တိုင်း ကျွန်တော်တို. Click လုပ်လိုက်တဲ. Links တွေ၊ ကြော်ငြာတွေ၊ အလကားရတယ်ဆိုတိုင်း Download ချထားတဲ. သီချင်း၊ ရုပ်ရှင်၊ စာအုပ်၊ Games စတာတွေမှာ Viruses တွေ၊ Malware တွေ မပါဘူးလို. ဘယ်သူမှ အာမမခံနိုင်ပါဘူး။ Adult Websites တွေ မကြည်.ဘူး၊ Download တွေ မလုပ်ဘူးဆိုရင် Viruses တွေ၊ Malware တွေ အန္တာရယ်ကကင်းပြီလားဆိုတော. မဟုတ်ပါဘူး။ Hackers တွေက ကျွန်တော်တို. ပုံမှန်ကြည်.နေကြ သာမန် Websites တွေကို Crack လုပ်ပြီး Malwares တွေ ထဲ.ထားနိုင်ပါသေးတယ်။
ဒီအန္တာရယ်တွေကို ကာကွယ်ဖို. ကျွန်တော်တို.တွေ Antivirus တွေ သုံးကြတယ်။ Internet Security Suite တွေ သုံးလာကြတယ်။ Antivirus တွေအပြင် နောက်ထပ် Security နဲ.ဆိုင်တဲ. နည်းပညာတခုရှိပါသေးတယ်။ Sandbox နည်းပညာပါ။ Sandbox ဆိုတာဘာလဲ။ ကျွန်တော် Wikipedia မှာ ရှာကြည်.ပါတယ်။ နားလည်လွယ်တဲ. အဖြေမရပါဘူး။ Google လုပ်ကြည်.တယ်။ မဆိုင်တာတွေပဲ များပါတယ်။ နောက်ဆုံး ကျွန်တော် Sandbox ကို စသိခဲ.တဲ.နေရာကို ပြန်သွားပါတယ်။ ဘယ်နေရာလဲ သိပါသလား။ Chrome OS ပါ။ ကျွန်တော် Chrome Notebook ကို စိတ်ဝင်စားခဲ.တာ Sandbox နည်းပညာကြောင်.ပါ။ Google က ရှင်းထားတဲ. Sandbox နည်းပညာကို လေ.လာကြည်.ရအောင်။
Google ကတော. Chrome OS အကြောင်းရှင်းထားတာပေါ.။ Chrome OS က Browser အခြေခံ OS ပါ။ Google Chrome ကလွဲရင် ဘာမှမပါဘူး။ Chrome Web Browser ကနေပဲ Web Applications တွေကို အသုံးပြုရတာပေါ.။ ပုံထဲမှာဆို အဝါ၊ အစိမ်း၊ အနီ ဆိုပြီး Chrome Browsers ၃ ခု ဖွင်.ထားတယ်။ အဲဒီ Browsers ၃ ခုကို ကြည်.ကြည်.ရင် ပူဖောင်းထဲ ရောက်နေတာကို တွေ.ရမယ်။ အဲဒီ ပူဖောင်းက Sandbox ပါ။
တကယ်လို. မတော်တဆ Malware တကောင်ဝင်လာတယ်ထား။ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ အဲဒီ Malware က Sandbox ထဲမှာပဲ ရှိနေမယ်။ အပြင်ကို ထွက်လို.မရဘူး။ အပြင်ကို ထွက်မရတော. တခြားနေရာကို အန္တာရယ်မပေးနိုင်တော.ဘူးပေါ.။ နောက် Browser ကို ပိတ်လိုက်ရင် Sandbox ထဲမှာ ပိတ်မိနေတဲ. Malware လဲ အလိုလိုသေသွားလိမ်.မယ်။ Youtube မှာ Video နဲ. ပြထားတာလေးကို ကြည်.ကြည်.ပါ။ တော်တော်ကြည်.လို.ကောင်းတယ်။
ဒီ Sandbox နည်းပညာက Virtualization တမျိူးပါပဲ။ Virtual Box တို.လိုမျိုးပဲ။ Virtualization ကို အသုံးပြုပြီး Softwares တွေ၊ Operating System တွေကို စမ်းသပ်ကြတယ်။ အခုတော. Security လုံခြုံရေးအတွက် သုံးလို.ရလာပြီ။
ဥပမာပြရရင် Avast Antivirus. သူ.မှာ Sandbox Feature ကို ထဲ.သွင်းထားတယ်။ ကွန်ပျူတာ Security ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်မချရတဲ. Programs တွေ၊ Files တွေကို ဖွင်.လိုက်ရင် ဒီ Program စိတ်မချရဘူး၊ Sandbox နဲ. ဖွင်.မလားဆိုပြီး မေးတယ်။ Sandbox နဲ. ဖွင်.လိုက်ရင် ကိုယ်ဖွင်.လိုက်တဲ. Program ဘေးမှာ အနီရောင်ဘောင်ခတ်ထားတာ တွေ.ရမယ်။ Chrome OS မှာ ပူဖောင်း၊ Avast မှာ အနီရောင်ဘောင်ပေါ.။ ဒါဆို အဲဒီအနီရောင်ဘောင်ထဲမှာ ဖွင်.ထားတဲ. Program ကနေ ကိုယ်.ကွန်ပျူတာကို ဒုက္ခမပေးတော.ဘူး။ စိတ်မချရတဲ. Programs တွေကို ဖွင်.ချင်ရင် Avast Sandbox နဲ.ဖွင်.ပါ။
Avast မသုံးရင်တော. ရွေးချယ်စရာတခုရှိတယ်။ Buffer Zone Pro ပါ။ အရင်က Shareware ထင်တယ်။ နောက်ပိုင်းတော. Free ပေးတယ်ဆိုပြီး Freewargenius မှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ MakeUseOf တို.၊ MakeTeachEasier တို.မှာပါ Reviews တွေ ဖတ်ရတယ်။ သူက ဘာ Antivirus တင်ထားတင်ထား သုံးလို.ရတယ်။ Buffer Zone ကို Install လုပ်လိုက်ရင် ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ. Programs တွေရဲ. Icons ပြောင်းသွားတာတွေ.ရမယ်။ အဲဒီ Programs တွေကို ဖွင်.ရင် Avast လိုပဲ။ အနီရောင်ဘောင်ထဲမှာ ဖွင်.ပေးတယ်။ Sandbox ထဲမှာ ဖွင်.ပေးတယ်ပေါ.။ Browsers တွေပါအပါအ၀င် Sandbox ထဲမှာ ဖွင်.တယ်။ အဲဒီမှာ Internet သုံးသမျှ၊ Download လုပ်သမျှကို Virtual File တခုထဲမှာပဲ သိမ်းထားပေးတယ်။ ကိုယ်တကယ်လို. စိတ်ချတယ်ဆိုရင် Virtual File ထဲကနေ ကိုယ်.ကွန်ပျူတာကို ပြန်ရွှေ.ပေးလို.ရတယ်။ သူကတော. မကြာခဏ စိတ်မချရတဲ. Websites တွေကို အသုံးပြုတဲ.သူတွေ အတွက် သင်.တော်တယ်။ Sandbox နဲ. မဖွင်.ပဲ ရိုးရိုးပဲဖွင်.ချင်ရင်လဲ ပြင်လို.ရပါတယ်။
Buffer Zone လိုမျိုး Sandbox နည်းပညာသုံး Softwares တွေရှိသေးတယ်။ သူတို.ကတော. Softwares စမ်းသပ်ချင်တဲ.သူအတွက် သင်.တော်ပါတယ်။ လေ.လာချင်ရင် MakeUseOf နဲ. Addictive Tips မှာ နည်းနည်းထပ်လေ.လာကြည်.လို.ရပါတယ်။ ကဲ ကျွန်တော်. Sandbox နဲ.ပတ်သတ်တဲ. အခြေခံလေးကို ဒီမှာပဲ အဆုံးသတ်ပါမယ်။ စာအုပ်မထုတ်ဘူးလို. LibreOffice ကို သုံးပြီး PDF လေးထုတ်ထားတယ်။ Myanmar3ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဘာမှတော. မဟုတ်ပါဘူး။ PDF သေချာထုတ်တတ်အောင် အလေ.အကျင်.လုပ်တာပါ။
Download - http://up4vn.com/?d=1YXB8M3H
Last edited by g00gle; 13-09-2011 at 01:26 AM..
စွမ်းကမ္ဘာ, သန့်ဇင်ဌေး, နေမင်းမောင်, မောင်ပေါ်ဦး, နိုးတူး, AZM, bonge, KznT, minthike, thureinsoe, zo
အကြိုက်ဆုံး, antivirus, virus
ကွန်ပြူတာမှာ Virus ရှိပါပြီ Task Manger, Folder Options and Registry ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း poekaunglay87 Virus & Anti-virus ပိုင်းဆိုင်ရာ 19 21-03-2012 11:28 PM
mgy.exe Virus (or) mgy Virus (or) Magway Fc Virus Removal မောင်ပေါ်ဦး Virus & Anti-virus ပိုင်းဆိုင်ရာ 27 23-03-2011 08:49 PM
Autorun Virus Remover_v2.3 PyaitSone Applications 10 08-08-2010 05:54 AM
Virus အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း.. မောင်ပေါ်ဦး Virus & Anti-virus ပိုင်းဆိုင်ရာ015-02-2010 04:41 PM
computer virus အစ koko01 အထွေထွေဗဟုသုတ203-07-2009 11:02 PM